Ngethuba lokuqala kwehlobo, wonke umfazi unomnqweno wendalo ngokupheleleyo ukuhlaziya ikhabethe kunye nokujonga imodeli kunye nenhle. Xa ukhetha iingubo zabasetyhini abaneemeko ezinobungakanani, kubalulekile ukubhala ingqalelo kwiinkcukacha ezithile, kuba ingubo ekhethiweyo kakuhle eya kukunceda ukufihla ezinye iimpazamo kumfanekiso wakho, kwaye ugxininise isidima somfanekiso wakho. Okokuqala, ndifuna ukuphawula ukuba xa ukhetha ingubo, kukufanele ukukhumbuza iibhathwe ezili-10, ezimele zigcinwe kwiingubo ezipheleleyo.
Banike iingubo ezinxibileyo ezinkulu. Kwakhona, uqaphele izinto ezinqamlekileyo-angora, corduroy, mohair.
Qaphela izilwanyana, i-ryusha, i-sleeve-lantern, i-frill.
Iingubo eziqhelekileyo zenza umfanekiso ungenasimo kwaye ugxininise zonke iimpazamo. Kwiingubo ezipheleleyo, kufuneka kubekho ukugqamisa.
Iijebethi kunye neebhatyi ngaphantsi kwe-hip - iingubo akuzona kuwe.
Ukuba unesandla esipheleleyo, vela iimpahla ezingenamikhono.
Abaqulunqi bakhela iindlela ezininzi zokugqoka iimpahla zokuzilophelela, ezivumela abafazi ukuba bazikhethele iinguqu zeengubo ezahlukeneyo. Izigqoko ezikhethiweyo ngokufanelekileyo zifihla ukusilela komfanekiso wakho kwaye ngexesha elifanayo kunenzuzo ukugxininisa zonke iingenelo, kunye nokwenza izikhalazo ngqo kuloo ndawo apho zifuneka khona.
Iimodeli zokugqoka iifesti zokufumana amantombazana kunye nabasetyhini
Abanikazi bezimo ze-chic akufanele babe neentloni baze banqabile ukugqoka, ngenxa yokuba loo nto yengubo yokugqoka iingubo njengengubo iphela kwaye ikulungele wonke umntu ngaphandle kokunye. Nantsi into ephambili kukuba ukhethe imodeli efanelekileyo.
Okokuqala, gxotha inkohlakalo enkulu, apho ilandela ukuba iingubo zasehlobo ezenzelwe iintombazana ezipheleleyo zimele zikhululeke. Enyanisweni, i-dress-hoodie ayiyikufihla kuphela iimpazamo zalo mfanekiso, kodwa, ngokuchaseneyo, ukubukeka kukukwenza uphelele ngakumbi.
Iimodeli zokugqoka zasehlobo zihluke kakhulu, kodwa iingubo eziphambili kakhulu zifanele zifakwe ngokulinganayo kwaye zineempawu ezilula.
Xa ukhetha ukugqoka, qwabela abo banomlenze ophezulu. Izambatho kunye nomlenze ogqithiseleyo zifihla ngokuzenzekileyo isisu esisisigxina, kunye neziqhenqa ezigqithiseleyo, ngelixa ziphumelela ngempumelelo amabele amnandi.
Ngokuqhelekileyo kuninzi, amantombazana anesigxina esipheleleyo abanikazi abonwabileyo besifuba esipheleleyo kwaye oku kufuneka kusetyenziswe ngokupheleleyo. Khetha izigqoko nge-V-intamo, iiprinti ezinkulu okanye i-brooch esifubeni.
Ukulungelelanisa ngokufanelekileyo iimfesane zokugqoka ezipheleleyo, ezinokuguqa kwamadolo, amahlombe avulekileyo kunye nebhande elibanzi. Le ngubo ihamba phambili kumantombazana enqeni. Kule meko, ibhanti iya kuba yintetho ebalulekileyo kwaye iya kugxininisa ubuhle bayo.
Icala lokugqoka lihlala lihluke kakhulu kwengubo yokuhlwa. Kufanele ihambelane ngokucacileyo kumfanekiso wakho, kodwa ungayiqinisi. Intombazana epheleleyo kwembatho enjalo iya kubonakala ibonisa isicatshulwa nesetyhini.
Inketho egqibeleleyo kubafazi abapheleleyo bahlala benxibe kwi-style style, kunye nesitayela sesiGrike. Iingubo ezinjalo ziza kuhamba ngokukhawuleza kumfazi wesifazane, zifihla ukuzaliswa kwe-tummy kunye namathanga kunye nokugxininisa amabele amahle.
Amantombazana aneenhlobo ezintle zihle kakhulu kwiimichilo kunye neengubo ze-midi, kunye neendlela zokugqoka ngeesitimela zijonga ngempumelelo. Ukusuka kwiingubo ezincinci, abachwephesha bayacetyiswa ukuba bayinqabe.
Qinisekisa ukuba imodeli yokugqoka ekhethiweyo ayinakugqithisa iminyango yakho nemilenze, ngaphandle koko uya kujonga.
Khetha izambatho zokugqoka
Kungcono ukhethe ingubo esuka kwijee, ikotoni, i-knitwear okanye i-chiffon. Ukuzaliswa kwezixhobo ezifana ne-satin, i-velvet, isilikhi.
Imidwebo kunye neempapasho kwiingubo zilungele ukhetho olukhethekileyo. Baza kubonakala bavelise umzobo wakho, kwaye uza kwenziwa unobuncwane obunobuncwane.
Ulibale i-stereotype, ethi i-black slim. Nangona inyaniso yokuba abamnyama ngokwenene benza isibonakaliso sibonakale sincinci, akuthethi ukuba le yona khetho. Izigqoko zasehlobo ezizalisiweyo zilungele ukhetho olubomvu, i-mint, i-lavender, i-pink, i-turquoise, i-beige tones. Vumela kwisigqoko sakho sokubakho kuya kuba neyodwa into ehlukile-intambo emnyama emnyama, kufuneka ibe khona kwi-wardrobe yabo bonke abesetyhini, kungakhathaliseki ukuba ubudala, ukuma okanye isimo.
Ukuba ulandela onke amacebiso angentla apha, ngoko unokukwazi ukuwuthabatha ngokukhawuleza ukuba ugqoke iingubo ezilungileyo kwaye ukhangeleke kakhulu kunoma yimuphi umcimbi.
Indawo eyintandokazi yenzelwe uthando
Ukuphulukiswa kunye neempawu zomlingo ze-prenita
Iyintoni intlozo yomfazi?
Ukuhlaselwa kwiinwele eziphakathi
Izizathu kunye nokunyangwa kokulahlekelwa yidlo
Abancinci abancinci: ulawulo lokushisa, iimpahla kunye nokuhamba
Izinto zokwesaba kwabantwana